မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ အပ်ိဳစစ္မစစ္ တကယ္ေျပာႏိုင္လား ??? - ACHITLWINPYIN
HomeSEXY KNOWLEDGEမိန္းကေလးတစ္ေယာက္ အပ်ိဳစစ္မစစ္ တကယ္ေျပာႏိုင္လား ???
February 24, 2018 Kwee Thiha SEXY KNOWLEDGE Comments Off on မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ အပ်ိဳစစ္မစစ္ တကယ္ေျပာႏိုင္လား ???
Credit – GM
ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အပျိုစင်အမှေးပါး (ပါကင်)နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နည်းနည်းလောက် ရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်။ အပျိုစင်အမှေးပါးဆိုတာက မိန်းကလေးအင်္ဂါဝကို ဖုံးအုပ်ကာကွယ်ထားတဲ့ အရေပြားအလွှာပါးလေးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ လုံးဝကြီးပိတ်ထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါမှလိင်မဆက်ဆံဖူးတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ အတူနေတဲ့အခါမှာ ထိုအလွှာပါးလေးကို ဖြတ်သန်းသွားဖို့လိုပါတယ်။ ဖြည်းဖြည်းချင်း ညင်ညင်သာသာ တွန်းထိုးပေးခြင်းအားဖြင့် အလွှားပါးလေးမှာရှိတဲ့ အပေါက်ငယ်က သင့်ပစ္စည်းဝင်လို့ရလောက်တဲ့အထိ ကျယ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ပေါက်ပြဲသွားတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ သွေးထွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအမြှေးပါ ကျယ်လာတာ၊ ပေါက်ပြဲသွားတာမျိုးက အားကစားတွေလုပ်ရင်းနဲ့လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ခ်မ္းသာေအာင္ျမင္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို့ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္တဲ့နည္းလမ္းမ်ား